Sayenzi, Tekinoroji, Mitauro | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: Science, Technics, Mitauro
Chii chinopfuura mwedzi kana pasi?
Chii chinopfuura mwedzi kana pasi? Mwedzi inotenderera pasi pano iyo duku. . Akavhiringidza mubvunzo pamusoro pehukuru! Unoda razhio kana nzvimbo yakakwirira? Nharaunda yepasi ndeye 6 kusvika kuchikoro che 10. Zuva ndiro iro guru.
Electric Nikola Tesla inogona kudzokororwazve?
Electric Nikola Tesla inogona kudzokororwazve? Kugadzirisa motokari yemagetsi Nikola Tesla Muchikwata chemotokari cheTesla, chinonzi chinogamuchirika (bhokisi rakasviba uye tsvimbo mbiri shure kwemufambisi wekare) zviri pachena kuti inotumira ...
Chii chinonzi liquidus?
Chii chinonzi fluidus? Iri ibwe reboka muAakanakan Liquidus - pane chikamu chinotevedzera mutsara wekunyungudika kwakazara kwenzvimbo dzakasimba. Iyo yakafanana, asi inopesana, pfungwa ndeyekusimbisa. Liquidus tembiricha (yaH .Yoder, 1976) TL - ...
Ndeipi MDF? Mhuri yangu Fedya iri pachena pepper Chidimbu MDF chinomirira Medium Density Fiberboard. MDF yakabuda senzira yekuvandudza nzira yakaoma yekugadzira fiberboard mahwendefa. Chinhu chacho ...
Chii chinonzi kuchinja?
Chii chinonzi kudhinda? Kunyepedzera (Eng. Kudhirowa - siya musungo, kubatwa, gadzirisa), iko kuumbwa kwenzvimbo dzakagadzikana kwazvo mu psyche mushure mekuita kamwe. Chimiro chekukurumidza uye kusimba kudzidzisa kwemurume mu ...
Pane munhu anoziva here kuti magasi anopera anogadzirwa chii?
Pane chero munhu anoziva kuti magasi anopera anogadzirwa nei? mvura, soot, kabhoni dioxide, kabhoni monoxide. Kubatanidza zvigadzirwa zvemafuta uye antifreeze. kunyanya mvura uye kabhoni diokiti .. sekusachena - kabhoni monoxide ...
Ndivanaani uye rini mabhakitiriya akawanikwa?
Ndivanaani uye rini mabhakitiriya akawanikwa? Kwenguva yokutanga mabhakitiriya akaonekwa mune imwe microscope uye yakatsanangurwa neDutch nyanzvi yezvinyorwa Anthony van Leeuwenhoek mu1676. Sezvisikwa zvipenyu zvose, akazvitumidza ...
Ko kukura kwehuwandu kwakasiyana sei nekugadzirwa kwemazhinji?
Ko kukura kwehuwandu kwakasiyana sei nekugadzirwa kwemazhinji? Mukugadzirwa kwemahombekombe, kugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirwa kunoitwa nekuenderera mberi kunourawa kubasa rebasa rezvinyorwa zvese zvinoramba zvichidzokorora. Mutsara wezita, zita guru rekuenderera uye ...
Ndeipi iyo rwizi Ik runopera?
Ndeipi iyo rwizi Ik runopera? Ik, Bolshoy Ik, rwizi muBashkir Autonomous Soviet Socialist Republic uye Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic, iro rekupedzisira riri kuruboshwe rweKam. Kureba kwe571 km, mubhedha nzvimbo 18000 km2. It flows mainly in the Bugulma-Belebeevskaya ...
Ndekupi uye ndiani akatanga kuuya nemabhuru
Ndekupi uye ndiani akatanga kuuya neBulb How Damn it is LENIN! "Ilyich's bulb" MuSt. Petersburg Yablochkov Zvakanaka, munhu wese akambokuudza nezve bulb ... Zvakanaka, mamirioni atouya neBulb (Lamp, Eulampius) ...
Chii chimiro chomweya?
Chii chimiro chomweya? + Kushivirira + Kushivirira + Kufambira Mberi + Mufaro + Kunaka + Mutsa + Kunzwisisa + Kuisa Mwoyo + Kuziva iwe nyika yako yomukati pamwe chete nevamwe. Ichi ndicho chinhu chausina uye hauzombofi. : ...
Nzira yekuwana sei chlorine oksijeni? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Chii chakaitika?
Nzira yekuwana sei chlorine oxides? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Ndeipi mhedzisiro? Ini ndinokuudza chakavanzika, kuwana nitrogen oxides ZVINonyanya kufadza. iwe paunenge waneta neklorini, edza pane kupisa kemukati mu3% nitric acid ...
Pachando chei mvura inopisa
pamvura inopisa sei pasi pe zero. Mhoroi Izvo zvinogamuchirwa kuti pasi peyakajairika yekudzvinyirira kudzvanywa uye kuvepo kwe-micro-suspensions mumvura - crystallization nuclei, mvura inotanga kuchema-chema panguva yekudziya kwakashata ...
Icho chirevo chekuwedzera kwekubhadhara.
Nheyo yekuraira kwekuwedzera. Kana iyo yekuwedzera iripiswa, simba rekuputika rinoendeswa kunzvimbo yepakati uye rinosundira mberi. Iyo inonzi Monro phenomenon inoonekwa - mhedzisiro iine mashandiro ayo ...
Chii chinonzi isomorphism? homomorphism?
Chii chinonzi isomorphism? homomorphism? Homomorphism (kubva homo ... uye chiGreek. Morphe fomu, fomu), iyo pfungwa yemasvomhu uye pfungwa, iyo yakatanga kutanga mune algebra, asi yakazove yakakosha pakunzwisisa mamiriro uye munda wezinga ...
Ndezvipi zvinyorwa zvitsva nezvemhuka yemunhu?
Ndedzipi pfungwa dzazvino dzekufunga nezvekwakabva munhu? hongu, ndiyo pfungwa yose - mabviro emunhu haasi akapusa, sezvavaimbofunga, somuenzaniso, vaifunga kuti zvemazuvano ...
Insurgent ndiani uyu?
Ndiani anopengesa ?? Vapambi (vapanduki, vapanduki) - zvombo zvevagari vemo, vachipesana nevane simba. Dzimwe nguva vanonziwo vakapakata zvombo, kunyange paine mashoma kufanana pakati pevaArmeter diss dissituides. Kazhinji vapanduki ...
Munhu "anoshamisa" anorevei?
Zvinorevei kuti munhu anoshamisa? zvisina kujairika, kusiyaniswa nechaunga nehungwaru ... nekuda kweduramazwi rinotsanangura rinopa dudziro inotevera yeapp. RANDOM: Yakakurumbira, yakamira pakati pevamwe. hunhu hurembedziro nenzira), zvinoreva zvisiri-zvakaja ...
Ko zita rokuti "blued steel" rakabva kupi?
Ko zita rekuti "bhuruu simbi" rakabvepi? Vorone # 769; simbi (oxidation, kusviba, bhuruu) ndiyo nzira yekugadzira dhaidhi yesimbi oxides (Fe3O4 uye vamwe) ine ukobvu hwe1-10 pamusoro pe kabhoni kana yakaderera alloy iron kana iron iron ...
Ndidzidzise kududzira, semuenzaniso, NKl muKend pendant - fizikiki. Ndinoziva kugadzirisa matambudziko, asi handizive kududzira manhamba.
Ndidzidzise kududzira, semuenzaniso, NKl muKend pendant - fizikiki. Ndinoziva kugadzirisa matambudziko, asi handizive kududzira manhamba. Ini ndinogara ndichishandisa mukana wekuwanda wani pasina kushandura mhedzisiro. Semuenzaniso 36 ...
peji 1 peji 2 ... peji 33 Next Page
Mibvunzo ye53 mu database yakagadzirwa mu 0,490 masekondi.